Nyanzvi Dzotaura Nezve Mafashamu Pamwe Nekushaikwa Kwemvura Mumaguta
Ndira 11, 2008
Kunaya kwemvura yakawandisa pamwe nekushaikwa kwemvura yekunwa mune mamwe maguta, kwaunza matambudziko makukutu munyika. Nzvimbo dzakaita seMuzarabani, Tsholotsho, Manicaland nedzimwe dzakawanda, dzakatarisana nedambudziko remafashamu, ayo aita kuti vanhu vanodarika zviuru gumi, vashaye pekugara.
Nyanzvi dzinoti mvura yanaya mwaka uno, haisati yamboonekwa mumakore zana nemakumi maviri nemanomwe (127), zvinowe zvaitawo kuti madhamu akawanda munyika azare.
Asi kuzara kwemadhamu uku, hakuna kupedza dambudziko rekushaikwa kwemvura yakachena yekunwa munzvimbo dzakaita seMabvuku, Tafara neHatcliffe muHarare, Gweru neBulawayo. Hatcliffe inonzi yava nemwedzi inodarika mitanhatu isina mvura yekunwa yakachena. Veruzhinji vave kuita mvura yekutenga kana kufukura mumahombekombe enzizi.
Zvirwere zvemanyoka zvinonzi zviri kupararira nenyika zvichitevera kuwanda kwemvura yekunaya, uye kushaikwa kwemvura yekunwa yakachena. Mibvunzo yavepo ndeyekuti zvii zvingaitwa mukugadzirisa matambudziko aya?
Mukutsvaga nzira dzingaitwa kana patarisanwa nematambudziko akadai, Studio7 yaita hurukuro nevaimbowe meya weguta reHarare, uye vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muMDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai, Engineer Elias Mudzuri, avo vari kuBoston, Massachusetts muno muAmerica, pamwe nenyanzvi munyaya dzekurima, VaJonah Nkabinde, avo vari kuJohannesburg, South Africa.
Vaviri ava vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti matambudziko akadai anogadzirisika kana nyika ichidyidzana zvakanaka nedzimwe nyika kuitira kuti iwane rubatsiro rwunodiwa pangu yakadai.